‘Safa umsindo weSophie’s Choice’ | News24
‘Safa umsindo weSophie’s Choice’
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Indawo iSophies Choice eMbali Unit One ekhathaza umphakathi ngomsindo.
AMALUNGU omphakathi owakhelene nendawo edayisa utshwala eyaziwa ngeSophie’s Choice eMbali Unit 1 athi akhathele umsindo osuke ubangwa kulendawo kusukela isonto liqala lize liyophela.
Ngokusho kwezinye zezakhamuzi ezikude buduze nale ndawo, ngenxa yezinga lomsindo kunzima ngisho ukuthi abantu abasuke behlezi ndawonye ebaleni ukuthi bazwane uma bekhuluma.
Omunye wezakhamuzi ocele ukuba igama lakhe lingadalulwa uthe njengabantu abakhelene nale ndawo sebekuthola kunzima ukuhlala kuyona ngenxa yezinga lomsindo, ikakhulukazi ngempelasonto lapho kusuke kukhona oDJ abasuke bedlala umculo usho phezulu.
Lesi sakhamuzi siqhube sathi ngoMgqibelo nangoLwesihlanu bayabikelwa ngoba basuke bazi ukuthi umculo uzomemeza phezulu kuze kulamule isikhathi sokuvala. Sithe nangeSonto futhi kuba yiso leso umsindo usho phezulu ngomculo nabantu abasuke bezophuza kule ndawo bebanga owabo umsindo.
Omunye wezakhamuzi uveze ukuthi kuba nzima kakhulu uma ngoba le ndawo isendaweni eyakhelene nemizi yabantu kanye namasonto amathathu angekude nayo.
“Ngesikhathi kuphuzwa kule ndawo kubangwa umsindo kuyadunyiswa kulamasonto, lokho akuvumelekile neze,” sisho isakhamuzi.
Umnikazi wendawo iSophie’s Choice uMnu Vusi Gumede uthe ngeke aze aphika ukuthi umsindo uye ube khona ngoLwesihlanu nangoMgqibelo lapho kusuke kukhona o-DJ.
Ukuphikile ukuthi ngeSonto uyavula wathi ngeSonto indawo yakhe ayivulwa.
“ Angikuphiki ukuthi umsindo uyaba khona uma kunguLwesihlanu nangoMgqibelo kodwa ngiye ngiqinisekise ukuthi ngivala ngesikhathi esifanele ukuthi kungabi nenkinga emphakathini.
“Kwesinye isikhathi uma kade kunezikhangiso ezithile zohlobo lotshwala umsindo uba khona kodwa yize kunjalo indawo ivala ngesikhathi esifanele.
“ Noma umsindo uba khona kodwa kushaya ihora leshumi nanye (11) sekuvaliwe. NgeSonto angivuli yingakho nje nginokudideka uma ngizwa ukuthi kunabantu abakhala ngokuthi kunomsindo obangwa ngeSonto.
“Abekho abantu asebeke bangazisa ukuthi bakhathazekile ngomsindo oqhubekayo. Njengosomabhizinisi osebenza lapho kunomphakathi khona ngeke kwangijabulisa ukunganami komphakathi ngoba ukhalaza ngomsindo. Uma kunezikhalazo ezinjengalezo ngizozibheka bese ngibona ukuthi ngabe kukhona yini lapho umuntu angenza khona ushintsho,” kusho uGumede.
“Angikuphiki ukuthi umsindo uyaba khona uma kunguLwesihlanu nangoMgqibelo kodwa ngiye ngiqinisekise ukuthi ngivala ngesikhathi esifanele ukuthi kungabi nenkinga...”